Xildhibaan Ducaale oo sheegay in siyaasada Kenya uu ka tagi do... | Universal Somali TV
Xildhibaan Ducaale oo sheegay in siyaasada Kenya uu ka tagi doono hadii Ruto madaxweyne Noqdo
Madaxa golaha aqlabiyada baarlamaanka Kenya ahna xildhibaanka magaaladata Garissa, Mr Aaden Bare Ducaale ayaa wuxuu sheegay in siyaasada uu isaga tagi doono sanadka 2022-da hadii William Ruto uu noqdo Madaxweyne.
Xilli uu wareysi siinayay tv-ga maxaliga ah ee Citizen ayuu sheegay in xitaa ay ugu filanahay shaqo in uu karaani ka noqdo aqalka madaxtooyada ee dalka looga Arimiyo.
Mr Ducaale oo taageero u ahaa Ruto tan iyo sanadkii 2007-da ayaa wuxuu tilmaamay in Ruto uu yahay siyaasi adag oo aan la loodi Karin uuna diyaar u yahay in taageero doorashada madaxtinimo ee Kenya sanadka 2022-da.
Xildhibaanka Garissa ayaa dhanka kale tilmaamay in loolanka 2022-da uu u dhaxeeyo William Ruto iyo hogaamiyaha mucaaradka ee xisbiga ODM Raila Odinga.
Dhanka kale mar uu ka jawaabayay hadii ay jiraan siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka bartamaha oo ciriiri gali gali kara in ticked-ka xisbiga Jubulle ay ku istaagi karaan, ayaa wuxuu tilmaamay in ay yihiin siyaasiyiin cayaaraya doorasho kastana ay sidaasi dhacdo.
Madaxa golaha aqlabiyada baarlamaanka Kenya ayaa tusaale u soo qaatay siyaasiyiinta kala ah Martha Karua, Peter Kenneth, Abduba Dida ay u tartameen kursiga madaxtinimo wax guul ahna aysan ka gaarin oo ay ahaayeen kuwa Cayaaraya.
Kan-xigaMaleysia oo ka fiirsaneysa in dalkeed...
Kan-horeDoorashada Madaxtinimo ee Jubbaland o...
50,443,814 unique visits